February 2018 – siifsiin
Handhuraan: horii Aabban ilmee kennu akka Aadaa Oromoo Booranaatti. Handhuuraa Oromoon durii qabdi. Addunyaan ammoo dhiyoo erga baankiin dhuftee egalte (book account) daa'imii yoo dhalate banuufi. Handhuuraallen akkasuma yoo daa'immii dhalattu akkaata armaan gadiitiin horii dhuunfaa isaa keennaniif. Handhuuraan jechaa handhuura jedhu irraa dhufe. Handhuurti walakkaa nafa namaa taha gadittifi taha olii jidduu jirti. Ammas … Continue reading Handhuraa
February 9, 2018 January 10, 2019 Leave a comment
Seenaa Guddataa (3ffaa)
https://soundcloud.com/user-897514358/seena-guddataa-3ffaa Guddataan du’a warra isaa kanaaf maal akka godhu hin beekne, garuu ollaan isaani isa gargaaran. Sirritti yaduufillee hin dandeenye, inni baay’ee gadde. Erga abbaafi haatisaa dhukkubsatanii irraa du’anii booda, ilmisaanii Guddataan immoo magaalaa keessa kadhataa oolee galee jaartii yommuu haatii fi abbaansaa dhukkubsachaa turan isa kunuunsaa turte sana waliin waggaa afur caalaa jiraateera. Guyyaa … Continue reading Seenaa Guddataa (3ffaa)
Seenaa Guddataa (2ffaa)
Kutaa Lammaffaa https://soundcloud.com/user-897514358/seena-guddataa-2ffaa Dandiin baay’ee dheera fi awwara waan ta’eef deemuf rakkisaa dha. Obbo Qannoo fi aadde Jiituun wal-jalaa callisanii deemaa jiru; homaallee walitti hin dubbatan. Isaan gara kallattii Adaamaatti miillaan deemaa jiru malee sammuun isaani immoo kallattii meeqaa fi meeqatti faca’ee cinqamaa jira. Namootni isaan beekanis ta’ee firri isaanis dugda itti galan. Maaliif? Adeemsa … Continue reading Seenaa Guddataa (2ffaa)